Wasiirka Maaliyadda DFS oo ugu baaqay Ganacsatada inay Canshuurta bixiyaan – Radio Daljir
Febraayo 28, 2018 3:49 g 0
Shir jaraa’id uu ku qabtay xafiiskiise, Mudane C/raxmaan Ducaale Byle Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa wuxuu kaga hadlay waxqabadka wasaaradda bisha Febraayo,warbixin hay’adda Lacagta adduunka ay ku ammaantay horumarka ay dowladdu ka sameysay hanaanka maamulmaaliyadeed ee Dalka iyo wadahadalo u socda ganacsatada iyo Wasaaradda ee ku aadan bixinta Canshuuraha.
“Reporkii ugu dambeeyey ay soo saartay IMFT guud ayaan ka gaarnay,taasina waxaa ku mahadsan madaxda Dowladda SOomalaiya oo uu ugu horeeyo madaxweynaha iyo raiisul Wasaaraha,oo dalkani ay sii yeen muhiimad gaar ah in uu horumar ku talaabsado,marka kaas waaye reporkii ka oso baxay IMFTA waa wax ku ool,marka hore waxaa la yiri dhowr iyo labaatanka qof ee guddiga ugu sareeya ayaa qofkasta wuxuu sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay in horumar ay ku talaabsato”.Ayuu yiri Wasiir Beyle.
Wasiirka Maaliyadda ayaa sheegay in ay jiraan wada hadalo ku aadan bixinta canshuuraha oo ay kula jiraan ganacsatada.
“Waxyaalo badan ayaa inoo suura galay waxaa kamid ah in canshuurta aan heshiis ka gaarno,in hoteelada aan ku soo rognay boqolkiiba 5% way naga aqbaleen,waxaan u sheegaynaa bishii way dhamaatay in wixii aan ku heshiinay in lacagahaasi qaadan oo Bangiyada ay geeyeen,anagana waxaan balanqaadaynaa in aan ku bixino sidii loogu talagalay”.ayuu intaasi ku daray C/raxmaan Ducaale.
Dhinaca kale Wasiir C/raxmaan Ducaale Beyle so hadal qaaday bixinta mushaharaadka shaqaalaha Dowladda,isagoo xusay in uu saxiixay mushaharadaasi.
“Waxyaalo badan ayaa ina horyaala waxaana kamid ah in aan bixino wixii nalaku leeyahay,waxaana kamid ah bixinta mushaharaadka shaqaalah Dowladda,hadda waan bilownay,waxaan saxiixay inta badan mushaharada maalmihii ugu dambeeyey, mushaharada,qaar ayaan bilowday,marka waxaan leeyahay dhamaan Soomaalida kunool gudaha iyo dibadda bixiya canshuuraha si uu dalka horumar u gaaro”,.
Arday Bosaaso lagu soo xiray Barashadda Kitaabka Al anwaaru suna (dhegayso)